Ungawalayisha kanjani amaphakheji ku-PPA yakho | Kusuka kuLinux
UDaniel Fuentes B. uyasichaza ungalayisha kanjani iphakheji kufayela le- ILaunchPad PPA. Lokhu ingaba wusizo ku- yabelana nomhlaba wonke amaphakheji we-.DEB walowo mdlalo / uhlelo obekuzoba nzima kakhulu ukufaka ku-Ubuntu.
Ukuze wenze lokhu, kufanele wenze okulandelayo:
1.- Bhalisela iLaunchpad bese usayina ikhodi yokuziphatha.
2.- Yenza kusebenze i-PPA yakho, kusuka ku-akhawunti yakho.
3.- Yakha iphakethe lomthombo lohlelo bese ulilayisha ku-PPA yakho, okwamuva kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi mhlawumbe kudinga incazelo ethile.
Ukwakhiwa kwephakeji yomthombo kuyefana nokwephakheji kanambambili. Kulokhu ngizoqhubeka nesibonelo sohlelo olubhalwe ku-python eliguqula amazinga okushisa (engangikudalele iphakheji kanambambili efanelekile phambilini).
Ngokuyisisekelo, iphakethe lakhiwe ngendlela efanayo, ngisho nangaphambi kokukhiqiza iphakheji kanambambili (Isinyathelo N ° 7), lapho kufanele usebenzise ezinye izinketho ku-dpkg-buildpackage ukudala iphakethe lomthombo, okungukuthi, kufanele wenze okulandelayo :
Okukhethwa kukho -S eyakho yokwakha iphakethe lomthombo nenketho -sa Kungenxa yokuthi lapho kulayishwa kufaka ikhodi yomthombo (the **. Orig.tar.gz).
I -sa ayidingekile uma ubeka kabusha iphakheji esivele ikhona ku-Ubuntu. Kuleso simo kuphela lapho ungathola khona i- * .orig.tar.gz kumakhosombe e-Ubuntu.
Ukuqalisa lo myalo kuzokhiqiza amafayela amaningi enkombeni. Lezo ezibalulekile (nokuthi kufanele sizilayishe) yilezi:
*** _ izinguquko zomthombo
***. orig.tar.gz (imvamisa ilayishwa uma -sa isetshenziswa, njengoba iqukethe imithombo ye-oLogic-Errorriginales ngaphambi kokuba ikhishwe ku-debianized)
Kuhlala ukubheka ukuguqulwa komthombo we-_ _ _ _ ukubona ukuthi ngabe kulungile (ikakhulukazi, shintsha ipharamitha yokusabalalisa ehambelana nayo). Isibonelo, isiguquli Kwahlala kanjena.
Uma yonke into isilungile kuzomele uyilayishe. Ngalokhu siqala ukufaka i-dput (thola ukufaka i-dput) bese siguqula ukumiswa ~ / .dput.cf ukuze ibukeke kanjena:
[i-my-ppa] fqdn = ppa.launchpad.net
indlela = ftp
okungenayo = ~ -user> / - ppa> / ubuntu /
login = engaziwa
Ukuyilayisha senza lokhu:
Impela, ukufaka esikhundleni se- *** okuhambisana.
Ngemuva kwalokho kufanele ulinde imizuzu engu-5-10 ukuze iLaunchpad ibone ukulayishwa bese iqala ukuhlanganisa iphakethe lekhodi yomthombo. Okwamanje umbuthano uyabonakala ojika eduze kwegama lephakeji.
Futhi i-voila, ngemuva kwemizuzu eminingana, amaphakethe azovela ku-PPA ehambisanayo.
Nge | | I-Logic-Iphutha
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungawalayisha kanjani amaphakheji ku-PPA yakho
Isimo sebhande le-flex, bheka
ngeke uzibuyisele emuva.
iwebhusayithi yami - http://en.co.Nz/wiki/index.php?title=Get_Ripped_Abs_Utilizing_Flex_Belt
I-DestroyTwitter: Ikhasimende elihle le-Twitter